सल्यानमा टुट्‍यो एमाले-माओवादी गठबन्धन, भित्री रहस्य छताछुल्ल !
ARCHIVE, POLITICS » सल्यानमा टुट्‍यो एमाले-माओवादी गठबन्धन, भित्री रहस्य छताछुल्ल !
सल्यान - सल्यानमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका चुनावी गठबन्धन टुटेको छ ।
माओवादीका आधिकारिक उम्मेदवार टेकबहादुर बस्नेतलाई एमालेका प्रदेस सभाका (क) उम्मेदवार गुलावजंग शाह हराउने भन्दै मतदाताको घरदैलोमा पुगेका छन् । चुनाव प्रचारको अन्तिम दिन सोमबार अलग अलग कार्यक्रम गरेका थिए । उनले माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धन टुटेको समेत बताएका छन् ।
माओवादी केन्द्रको विवाद चर्किदै एकले अर्कालाइ कारवाही गर्ने तहसम्म पुगेको थियो । जिल्ला पार्टीले केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार टेकबहादुर बस्नेतलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गर्न केन्द्र र प्रदेशमा सिफासिर गरेको छ ।
त्यसैगरी बस्नेत समूहले पनि जिल्ला संयोजक कर्णबहादुर बुढाथोकीलाई कारवाही गरेको भन्दै अर्कोलाई तोकेको थियो । माओवादी केन्द्रले आन्तरिक विवादको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा गठबन्धनमा नै असर परेको छ । एमाले उम्मेदवारहरुबीच पनि राम्रो सम्बन्ध छैन ।